Fifadian-kanina amin’ ny volana Ramadany
Fivahiniana masina (silamo)
László Kubala dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Espaina, Polonia teraka ny 10 Jiona 1927 tao Budapest ary maty ny 17 Mey 2002 tao Barselona
Paulino Alcántara dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Espaina, Filipina teraka ny 7 Oktobra 1896 ary maty ny 13 Febroary 1964 tao Barselona
Néstor Almendros dia talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 30 Oktobra 1930 tao Barselona ary maty ny 4 Martsa 1992 tao New York
Alfonso Balcázar dia mpanoratra senariô, talen-koronantsary, mpamoaka horonantsary mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 2 Martsa 1926 tao Barselona ary maty ny 28 Desambra 1993
Joaquim Jordà dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 9 Aogositra 1935 ary maty ny 24 Jiona 2006 tao Barselona
Bigas Luna dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 19 Martsa 1946 tao Barselona ary maty ny 6 Aprily 2013
Lina Romay dia mpilalao, talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 25 Jiona 1954 tao Barselona ary maty ny 15 Febroary 2012 tao Málaga
Carlos Atanes dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpanao asa soratra, mpanoratra mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 8 Novambra 1971 tao Barselona
Ny torovintana dia kisary sy lahatsoratra ataon ny olona momba ny fanandroana, izay mampifandray ny evan ny zôdiakanny fotoam-pahaterahana amin ny toetran ny olona nateraka na hateraka amin io fotoana io sy amin ny zavatra mety hitranga mahakasik ...
I Antiokosy Zandriny dia lefitry ny mpanjaka seleokida tao Siria atao hoe Antiokosy III, izay tokony handimby an-drainy nefa maty talohanny fotoana. I Laodike III no reniny. Teraka taminny taona 221 tal. J.K. izy ary maty taminny taona 193 tal. J.K.
Ny Filazantsarani Petera na Evanjelin i Piera dia evanjely apokrifa iray karazana amin ireo Filazantsara sinôptika izay tokony ho voasoratra taorian ny fisasahan ny taonjato faha-2. Io no hany evanjely mitantara amin ny antsipiriany kokoa ny nivo ...
Pandemia gripa A(H1N1)
Ny gripa A ny 2009 dia aretin-aina mora mifindra entinny otrikaretina gripa A aminny karazana H1N1 ao aminny zana-karazana A AH1N1 anny gripa tsotra. Niseho taminny 2009 io virus io ary mifindra aminny olombelona. Ny epidemia gripaly vokatrio fio ...
Fanangonana J-nny Fahazazana
Ny Fanangonana J-nny Fahazazana dia fitantarana apokrifa kristiana aminny fiteny latina ny aminny fahazazani Maria, ny fahaterahana sy ny fahazazani Jesosy. Atao hoe "fanangonana" izy io satria fanambarana lahatsoratra samihafa. Ny litera J dia a ...
Ny Asani Petera na Asani Piera dia soratra apokrifa kristiana tranainy taminny taonjato faha-2 na taminny fiantombohanny taonjato faha-3. Azo zaraina roa ny boky: ny fizarana voalohany mitantara zavatra niseho tao Jerosalema fa ny faharoa kosa mi ...
I Jean-Léonard Rugambage dia mpanao gazety roandey ao aminny gazety mpivoaka indroa isam-bolana atao hoe Umuvugizi, izay nanaovany lahatsoratra misy fitsikerana mamaivay ny fitondrani Paul Kagame. Maty nisy nitifitra tao aminny toeram-ponenany ao ...
Ny Salamo faha-11 na Salamo 11 dia salamo ao aminny Baiboly, ao aminny Bokinny Salamo. Tafiditra ao aminny fizaràna atao hoe "boky voalohany" ity salamo ity.
Ny polistirenina fototra, tenenina hoe Polistirenina vatosonga, dia zavatra mafy sady mora vaky, mety voaloko na tanterankazavana. Ny tondro mekanikany sy ara-kafananany dia mety ho voaova aminny fanampiana plastifiant na biotadienina fingotra mb ...
Fanampinny Bokini Daniela
Ny fanampinny Bokini Daniela na fanampinny Bokini Daniely dia soratra fanampiny hita ao aminny Bokini Daniely ao aminny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa. Ity tovana ity, izay tsy voasoratra tamin’ny fiteny hebreo na arameana fa tamin’ny f ...
Ny roimainty dia zavamaniry isan-karazany misy tsilo izay anisan ireo ataon ny Malagasy hoe roy, izay mitsinjara amin ny karazan-javamaniry efatra, dia ny Rubus, ny Toddalia, ny Hibiscus ary ny Dichrostachys. Anisan izany ireo atao amin ny anaran ...
Ny paoma dia voankazo fihinana, be nofony malemy, mamy na somary makirana, sady misy ranony, avy amin ny zavamaniry atao amin ny anarana ara-tsiansa hoe Malus.
Ny tongolobe, izay antsoina koa hoe ny boafidy bombay na ny tongolo mahazatra, dia legioma izay zavamaniry tena be mpampiasa indrindra aminny fototarazo Allium.
Ny taratasy dia akora nomena endrika takelaka manify namboarina amin ny tsiraky ny zavamaniry mba hametrahana ny soratra, hampiasaina amin ny fanadiovana sy ny fahadiovana, ny fitantavanana, ny fitahirizana, sns.
Ny holatra dia misy mpikambana ao aminny tarika zavamaniry izay ahitana ny zavamiaina bitika toy ny masirsira sy bobongolo, ary koa ny holatra fanta-daza kokoa.
Ny taova dia vondrona sela misy fiasa mitovy aminizany. Ny ainny zavamaniry sy ny ainny biby dia miankina aminny taova maro izay miara-monina aminny rafitry ny taova.
Ny voaroimainty dia zavamaniry misy tsilo isan-karazany fa tsy tokana, samy amin ny karazana Rubus. Ireto ny anarana ara-tsiasan ny zavamaniry antsoin ny Malagasy amin ny anarana hoe voaroimainty io: Rubus apetalus sy Rubus myrianthus ary Rubus p ...
Ny roibontsy na rohibontsy na robontsy na roinosy dia hazo mirefy 6 hatramin ny 7 m izay manana sampana sy rantsana misy tsilo. Miendrika bola miloko fotsy ny voniny. Mitovy aminny an ny tsaramaso ny voany. Tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ity z ...
Ny voaroimbazaha dia zavamaniry isan ireo antsoin ny Malagasy hoe voaroy, izay fihinam-boa, ao amin ny fianakavian-javamaniry Rosaceae. Rubis rosoe folius ny anarany ara-tsiansa. Atao amin ny teny malagasy hoe voaroimena na voarointsaka koa izy.
Ny voarointsilo dia zavamaniry anisan ireo antsoin ny Malagasy hoe voaroy, izay manana anarana ara-tsiansa hoe Rubus pauciflorus na Rubus niveus, ao amin ny fianakavian-javamaniry Rosaceae. Antsoina amin ny teny malagasy hoe roimainty na voaroima ...
Ny raozy dia zavamaniry voninkazo maharitra faharetanny karazana Rosa, ao aminny fianakaviana Rosaceae, na ilay voninkazo entiny. Misy karazany 300 mahery sy mpamboly analiny maro.
Ny katsentsitra na kantsentsitra dia zavamanana aina izay mivelona aminny fihinana ny zavamanana aina hafa izay tsy vonoiny fa iraiketany velany na any anatiny na tsidihiny matetika. Ny kantsetsira dia matetika biby nefa mety ho zavamaniry koa. N ...
Ny tokantandroka dia iray aminireo dimy karazany mbola tsy hita ao aminny fianakaviana Rhinocerotidae, ary koa ny karazan-java-maniry maro be ao aminy. Ny roa aminireo zavamaniry mbola mivelona dia teraka tany Afrika, ary ny telo mankany Azia Atsimo.
Ny voromailala dia fianakaviana vorona. Io irery no fianakaviana ao aminny filaharana Columbiformes. Vorona mailo izy ireo, ary lava hatoka, ary faktiora fohy manify izay ao aminny karazana sasany dia misy ceres nofo. Ny voa sy ny voankazo ary ny ...
Ny rointsokina dia zavamaniry isan ireo antsoin ny Malagasy hoe "roy", izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Misy mitovitovy karazana aminy any Azia Atsimo sy ny faritra anelanelan ny zana-pehintany atsy Afrika. Barleria prionitis subsp. madaga ...
Ny voaroy dia zavamaniry misy tsilo isan-karazany fa tsy tokana, izay samy misy voany kely menamena, ka ny ankamaroany dia ao amin ny karazana Rubus. Ao Ireto avy izy ireo: ny voaroibe, ny voaroihazo na hazondandy, ny voarohitsaka na voaroitanala ...
Ny roibe dia zavamaniry, karazana roy misy voniny mitapelaka miloko mavo, ny tahony dia misy tsilony maromaro maranitra, misy tsiratsiraka ny hodiny, mirefy 1 hatramin ny 2 m ny haavony. Kely izy raha maniry amin ny tany karankaina ka atao hoe ro ...
Ny faditra dia zavatra ratsy ahodinny sasany aminny tena na momba ny tononandro ka tokony ho sakanana na esorina aminny alananny fanalana faditra. Ny karazam-borona na ny ondry mazava loha, na ny singa avy aminny zavamaniry na zavatra hafa dia az ...
Ny kere na mosary dia tsy fahampian-tsakafo tafahoatra izay maharitra aminny faritra iray manontolo sady mahazo olona maro dia maro fa tsy olona iray na vitsy monja. Karazanantony roa no mahatonga ny kere. Ny voalohany dia ny loza voa-janahary ma ...
Ny Evanjelinny Ebiônita na Filazantsaranny Ebiônita dia anarana iantsoana ny evanjely jodeô-kristiana nampiasainireo atao hoe Ebiônita. Ankehitriny dia very io boky io ka tsy fantatra ny momba azy raha tsy aminny alalanny tonontsiahy ataonireo Ra ...
Ny kininina dia hazo afaka maniry avy any Aostralia, izay ahitana karazany miisa mihoata ny 800 tamin ny taona 2000. Izy no mamorona ny ampahany be amin ny ala any amin ny tapany atsimo-atsinanan i Aostralia. Ny anarana ara-tsiansan ny kininina d ...
Ny goavy dia voankazo avy amin ny zavamaniry mitovy anarana aminy izay velona amin ny faritra manana toetanin-janapehintany, fihinana, boribory na miendrika atody na poara, mirefy 3 hatramin ny 10 sm ny savaivony. Manify sady mora rovitra ny hodi ...
Ny antrendry dia voankazo avy amin ny zavamaniry mitovy anarana aminy atao amin ny anarana ara-tsiansa hoe Phœnix dactylifera, izay volena manerana izao tontolo izao any amin’ ireo faritra manana toetany mafana sy maina. Ny fitambaran’ ny voan’ n ...
Ny paiso dia voankazo fihinana, be nofony, mamy, azo avy amin ny zavamaniry mitovy anarana aminy izay atsoina amin ny anarana ara-tsiansa hoe Prunus persica. Voankazo boribory, nofosana sy mamy ary be ranony ny voam-paiso rehefa masaka. Misy vihy ...
Ny Doalhija dia volana faharoa ambin ny folo ao amin ny tetiandro miozolmana. Ny fanaovana fivahiniana masina any amin ny tanànan i Maka mandritra ny folo andro voaohany no manamarika io volana io. Iray amin ireo volana masina efatra ny Doalhija, ...
Ny Saoaly dia volana fahafolo ao amin ny tetiandro miozolmana. Ny fankalazana ny fetin ny fahataperan ny fifadian-kanina na Idy amin ny andro voalohany amin io volana io no manamarika azy. Manarakaraka ny volana Ramadany ny volana Saoaly. Amin ny ...
Ny Doalkida na Doalkada na Dolkada dia volana fahiraika ambin ny folo ao amin ny tetiandro miozolmana. Iray amin ireo volana masina efatra ny Doalkida, ka ny telo hafa dia ny Moharamo sy ny Rajabo ary ny Doalhija. Amin ny teny arabo dia atao hoe ...
Ny Moharamo dia volana voalohany ao amin ny tetiandro miozolmana ary isan ny volana manan-danja indrindra izy, indrindra ho an ny Silamo siita. izay ahatsiarovana ny fahafatesana maritiorani Ḥusayn ibn ʿAlī sy ny fianakaviany. Iray amin ireo vola ...
Finoana silamo Volana ao aminny tetiandro miozolmana: Moharamo arabo: مُحَرَّم / Muḥarram, Safary صفر / Safar, Rabialaoaly ربيع الأوّل / Rabi al Awal, Rabiatany ربيع الثاني / Rabi ath-Thani, Jomadaalaoaly جُمَادَىٰ الْأَوَّل / Jumada al Awwal, Jo ...
Ny Rajaba na Rajabo no volana fahafito ao amin ny tetiandro miozolmana. Iray amin ny volana masina ny Rajabo, ka ny telo hafa dia ny Moharamo sy ny Doalkida ary ny Doalhija. Ny anaran io volana io amin ny teny arabo dia رجب / Rajab. Ny faha-27 di ...
Ny Ramadany dia volana fahasivy ao amin ny tetiandro miozolmana na tetiandro silamo. Io ihany ny anaram-bolana hita ao amin ny boky Korany. Ho an ny mpino silamo dia io no volana tsara indrindra satria io no volana ifadian-kanina sady ahitana ila ...
Volana ao aminny tetiandro miozolmana: Moharamo arabo: مُحَرَّم / Muḥarram, Safary صفر / Safar, Rabialaoaly ربيع الأوّل / Rabi al Awal, Rabiatany ربيع الثاني / Rabi ath-Thani, Jomadaalaoaly جُمَادَىٰ الْأَوَّل / Jumada al Awwal, Jomadaatania جماد ...